Yintoni uLwesihlanu oLungileyo?
NguRichard Wagner, uKurt Warner
NgoLwesihlanu oLungileyo-ngolwesiHlanu ophambi kwePasika-uphawula usuku apho uYesu Kristu wabethelelwa emnqamlezweni ngenxa yezono zehlabathi. Igama elithile ULWESIHLANU olungileyo inokudideka ukuba uyadibana Kulungile nge wonwabile . NgoLwesihlanu olungileyo ayilo suku olonwabisayo, kodwa igama layo sisikhumbuzo sokuba abantu banokuthathwa njengabalungileyo kuphela ngenxa yento eyenzekileyo ngala mhla.
Abanye bakholelwa ukuba igama lalo ekuqaleni NgoLwesihlanu kaThixo, ethi, ekuhambeni kweminyaka, ibe ligama layo langoku. EJamani, amaKristu ayibiza njalo NgoLwesihlanu ozolileyo (ukusuka emini ngoLwesihlanu kude kube ngentsasa yePasika, iintsimbi zecawa zihlala zingathethi). AmaKristu akwezinye iindawo zaseYurophu ayibiza njalo NgoLwesihlanu oMkhulu okanye NgoLwesihlanu oNgcwele .
NgoLwesihlanu oLungileyo lusuku lokuzila kunye nosizi ngenxa yokufa kukaYesu Krestu nokuzikhumbuza ukuba izono zabo bonke abantu zabangela ukuba afe kwasekuqaleni. Ikwayimini yokubulela ngokuzincama okuphezulu awakwenzayo.
Maxa wambi iicawa zamaProtestanti ziba neenkonzo phakathi kwemini nentsimbi yesi-3: 00 emva kwemini. ukukhumbula iiyure zikaYesu emnqamlezweni. AmaKatolika ahlala esusa yonke into esibingelelweni aze awaphuze umnqamlezo njengendlela yokunqula. Ezinye iicawa zide zibambe Inkonzo yobumnyama apho kucinywa amakhandlela bade abantu bashiyeke behleli ebumnyameni obupheleleyo, njengesikhumbuzo sobumnyama obagubungela umhlaba emva kokufa kukaYesu, njengoko kubhaliwe kuLuka 23: 44–46:
Ke kaloku, kwakumalunga nelixa lesithandathu, kwaza kwakho ubumnyama phezu kwawo umhlaba uphela, kwada kwaba lilixa lesithoba. Lathi ikhuselo lengcwele lakrazuka kubini. UYesu wamemeza ngelizwi elikhulu, Bawo, ezandleni zakho ndiwunikela umoya wam. Uthe etshilo waphuma umphefumlo.
Imiphumo emibi ye-15 mg
Ngaba kufanelekile ukuba ndithathe i-advil okanye i-tylenol
Udidi lokumitha lwe-magnesium sulfate
umngxunya kwiqhosha lesisu
Ngaba i-advil ine-ibuprofen kuyo